Xildhibaan Fiqi: NINKII DHUUMANAAYEE DHABARKIISU MUUQDAY! – Kalfadhi
War-bixintii Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka jawaab loogama dhigi karo:
1. In Xubnihii Guddiga Maaliyadda la kala jabiyo;
2. In Wasaaradda Maaliyadda ay war-bixinno cay ama aflagaado iyo heeso ah Golaha ka hor jeediso, ayagoon si waafi ah u bixin jawaabaha eedaymihii loo soo jeediyey;
3. In Xildhibaanadii Wasiirada ahaa qasab looga dhigo in ay shirkii maanta tagaan, sacbiyaanna marka ay maqlaan hadal u roon; iyo
4. In Guddooomiye Kuxigeenka Labaad, oo kulankii maanta shir guddoominayey uu Golaha afduubo, ajandihii maanta la ansixiyeyna uusan Xildhibaanada ka baxsan, Guddiga Maaliyaddana u siin fursad ay uga hadlaan.
Waxaa kulankii maanta ee Golaha Shacabka ka muuqday in aan la ogolayn isla xisaabtan iyo daah-furnaan ka dhex-dhacda Golayaasha Barlamaanka iyo Xukuumadda, laakin madaxda iyo Wasiirka Maaliyadda la arkay ayagoo shacab ay meel ku soo xaraysteen dhex-fadhiya oo ku celcelinaya “nala xisaabtama” iyo shacabka ayaa na xisaabinaya, ayadoo taas ay manta dhabowday.
Kulankii maanta waxaa ka muuqday, isku dhex-yaac Wasaaradda Maaliyadda ah, kalimado is-difaacid ah oo loo xoogayey Wasaaradda Maaliyadda, ayadoon ajandihiiba la guda-galin, caburin xildhibaanada uu ku sameeyey Kusimaha Guddoomiyaha iyo in la keeno Golaha warbixinta Guddiga Maaliyadda, oo uu Guddoomiye Kuxigeenka Labaad dusha u saaray Guddoonka Golaha Shacabka, cudurdaarna uu ka sameeyey.
Waa wax laga xumaado in kulankii maanta uu sidaas ku soo gaba-gaboobo, kaasoo ay aheyd in Wasaaradda Maaliyadda su’aallo badan, oo ku saabsan war-bixintii Guddiga la weydiiyo, laakin in Wasaaraddii iska hadasho, ayadoon cidna wax weydiin, xildhibaanadiina afka la qabto, waxaan u malaynayaa in ay tahay nidaamka cusub ee isla xisaabtanka dawladdeena.
Kulankii maanta ayaa daliil ugu filnaa Ummadda Soomaaliyeed in ay jirto wax daahsoon, oo la daboolayey, ayadoo xaalku u ekaa Ninkii Dhuumanaayee Dhabarakiisu Muuqday.